China 38″Gomba reMoto Ine Swivel Grill vagadziri uye vatengesi | THYH
38 ″GOMBA YEMOTO NESWIVEL GRILL
- Inogadziriswa swivel grill grate yakanakira kubika kunze
- Inouya ne27 ”fire iron tool
- Chitubu chekubata pane inogadziriswa grate kuchengetedza maoko ako
- Heavy duty simbi kuvaka inogona kugara kwemakore nekutarisirwa kwakakodzera
-Powder-yakavharwa pendi basa rinowedzera kushora ngura
- Yakazara dhayamita: 38"
- Kureba kwese: 22 1/2”
- Grill grate dhayamita: 28”
- Kudzika kwekamuri yemoto: 12"
- Moto wekamuri dhayamita: 30 "
-Kureba kwechishandiso chemoto: 27 1/4”
Ita kuti manheru ako ekunze asakanganwike nebasa rinorema 38 ”Moto Pit ine Swivel Grill kubva kuTianHua Firepit! Iyo swivel-style simbi grill grate ine isingaite inotsvedza pakurongeka kwayo, uye yakanakira kubika nyama inonaka kana kuchengeta moto uri mukati megomba. Iyo 27 ”Moto Iron chishandiso chinouya chemahara negomba rega rega, uye chinokutendera kuti utarise matanda kana nyore kugadzirisa swivel grate panguva yako yekuzorora. Chitubu chekubata chinosungirirwa kune grate zvakare, kana iwe uchida mamwe maoko-on nzira.
Iyo inorema basa resimbi muviri wakasimba, wakasimba, uye unokwanisa kutsungirira zvinhu zvekunze kwemakore nekutarisirwa kwakakodzera. Pendi yependi nhema yakatsetseka inovhara gomba remoto, neupfu-kuvharidzira kuti ive nechokwadi chekudzivisa ngura nezvimwe zvinhu zvemamiriro ekunze. Pa 38” pahupamhi hwese, unogona kuvaka moto wakakura unodzvova kuti udziye munguva yechando, kana kuvhenekera kuseri kwemba yako manheru echirimo - gomba remoto iri rakanaka gore rose!
ADJUSTABLE SWIVEL GRATE: Iyi grill grate inotsvedza zviri nyore, uye yakanakira kuchengetedza moto wakakura urimo kana kubika chikafu chinonaka neshamwari dzako nemhuri. Chitubu chekubata chinosungirirwa kuitira kuti maoko ako arambe akachengetedzwa paunenge uchigadzirisa girati.
SHANDISA KUPIYA NEKUPEDZA KWEPANZE: Dziyisa mwedzi yako yechando nemoto unodzvova une 38” muhupamhi hwese! Manheru echirimo, unogona kupisa murazvo wakajeka uye chengetedza imba yako yakavhenekerwa zvakanaka zvekubikira-husiku.
MOTO IRON TURU INOsanganisirwa: Simbi yemoto yesimbi inouya negomba rega rega, kuve nechokwadi chekuti une zvese zvinodiwa kuti moto wako uende kunze kwebhokisi. Simbi yemoto inoreba makumi maviri nemanomwe, saka kunyangwe moto wakakura unogona kupingudzwa uye kuchengetwa zvakanaka uri kure.
HEAVY DUTY STEEL CONSTRUCTION: Yakavakwa nesimbi yakasimba uye yakagadzirirwa kumirisana nemamiriro ekunze, unogona kuva nechivimbo chekuti gomba remoto iri richamira muyedzo wenguva uye ive yako yekuseri kwepakati kwemakore anotevera.
DIMENSIONS: Iri gomba remoto rinoyera 38-in yedhayamita yese, uye ine hurefu hwakakwana hwe22 1/2-in. Imba yemoto pachayo ndeye 12-yakadzika ne 30-mukati mukati medhayamita, uye iyo grill grate pamusoro ine 28-mu dhayamita.
Zvakapfuura: Solid Steel Self-feeding Fire Pit Basket
Zvinotevera: Anson Simbi Huni Kupisa Moto Pit
GOMBA REMOTO NEKUSVIRA GRILL
30″ Yakakura Nyore Nyore Stainless Simbi Spa...
Mambure akarukwa zvine mutsindo akakwenenzverwa Stainless Steel. Stainless simbi inoshingirira kumamiriro ekunze kwekuwedzera hupenyu hurefu. Inodzivirira pfarivari nezvidziva kuti zvisapunyuka. Ndokumbira uyere gomba rako remoto kuratidza kuti 29-30 inch skrini ichakwana zvakachengeteka. Hinged spark screen inobvumira kupinda nyore kumoto pasina chikonzero chekubvisa skrini uye ine mubato wakanakira pamusoro kusimudza skrini nekudzima. Nekuda kweiyo hinged hunhu hwechidzitiro, iyo dhayamita ipfupi neimwe nzira pane imwe, iyo inobvumira iyo sh ...
Iyi yakatsetseka uye yakasimba Hex Fire Grate kubva kuTianhua Firepit ndiyo nzira yakanaka yekuwedzera kuyerera kwemhepo kumoto wako kuitira kuti utore iwo moto unodzvova unodiwa mumwedzi inotonhora yechando! Ingoisa mukati menzvimbo yako yemoto iripo kana gadzira iyi grate kukwezva kwayo uye wagadzirira kuenda! Zvimiro: - Mipendero yakakomberedzwa inochengetedza matanda kuti asakunguruke kubva pamoto gireti kuitira moto usina njodzi. - Hex chimiro chinopa chimiro chitsva uye chakasarudzika kunzvimbo yako yemoto. - Inopihwa mumatatu akasiyana saizi (23 ″, 28 ″, uye 36 ″ ...